I-WTN yehlukile ne-WTTC ekwakheni kabusha ukuvakasha nokuvula kabusha ezokuvakasha
Ikhaya » Izindaba Zamuva » ezithrendayo Manje » I-WTN yehlukile ne-WTTC ekwakheni kabusha ukuvakasha nokuvula kabusha ezokuvakasha
Ibhodi Yezokuvakasha yase-Afrika • zezindiza • Izindaba Ezintsha Zokuhamba • Ukuhamba Ngebhizinisi • Amahhotela nezindawo zokungcebeleka • Human Rights • I-LGBTQ • Izindaba • Ukuphepha • Ezokuvakasha • Transportation • Ukuvuselelwa Kwendawo Yokuhamba • Izindaba Zocingo Lokuhamba • ezithrendayo Manje • Izindaba ze-UK Breaking • I-USA Izindaba Ezintsha • Izindaba Ezihlukahlukene
Kunesizathu esizwakalayo sokuthi kungani uJuergen Steinmetz, umsunguli weWorld Tourism Network (WTN) ehluke noGloria Guevara CEO weWorld Travel and Tourism Council (WTTC) ngokuthi angavula kanjani futhi kanjani ngokuphepha umkhakha wezokuvakasha. I-WTTC imele izinkampani ezinkulu nezinamandla kakhulu embonini. Ukugxila kwe-WTN kusezinkampanini zomkhakha wokuhamba ngosayizi ophakathi nendawo naphakathi emhlabeni. Zombili izinhloso zenhlangano ukwakha kabusha umkhakha wezokuvakasha nezokuvakasha ngokuphepha futhi kunenzuzo.
Abaholi abasanda kusungulwa Inethiwekhi Yezokuvakasha Yomhlaba (WTN) kodwa kwehlukile esikhalweni esimenyezelwe nguGloria Guevara, uMongameli kanye ne-CEO ye Umkhandlu Wezwe Wokuvakasha Nezokuvakasha (WTTC) ngokuthi impendulo esheshayo kufanele ibukeke kanjani ekuvuleni kabusha imboni yezokuvakasha nezokuvakasha. I-WTTC ifuna ukuvula ezokuvakasha nezokuvakasha manje, kuyilapho i-WTN ithi: “Linda!” Bobabili bayavumelana ngokuphepha kepha abavumelani uma ukumiswa ngokushesha kokuhlukaniswa nokuvulwa kwemingcele kungenziwa ngokuphepha.
Izolo, uGloria Guevara uthe: “Umkhakha wase-UK Travel & Tourism usemzabalazweni wokusinda - kulula nje. Njengoba lo mkhakha usesimeni esintekenteke kangako, ukwethulwa kokuhlukaniswa kwamahhotela nguhulumeni wase-UK kungaphoqa ukuwa ngokuphelele kweTravel & Tourism. ”
I-WTTC ibuye igcine ukuthi ngaphandle kwezinyanga zokuhlukaniswa okuphoqelelwe ngemuva kokuhamba, abukho ubufakazi bokuthi lokhu kuyasebenza.
“Ngisho izibalo zikahulumeni uqobo zikhomba ukuthi abantu abahlukaniswayo abakhombisanga kusebenza ngempumelelo ekwehliseni ukusabalala kwe-COVID-19. Ukudluliswa komphakathi kuyaqhubeka nokuba yingozi enkulu kakhulu kunokuhamba amazwe omhlaba, ”kusho uGuevara.
“I-WTTC ikholelwa ukuthi izinyathelo ezethulwe nguhulumeni ngeviki eledlule kuphela - ubufakazi bokuhlolwa kwe-COVID-19 ngaphambi kokuhamba, kulandelwe ukuvalwa okuhlukanisiwe okwesikhashana nolunye uvivinyo uma kunesidingo - kungalimisa igciwane emikhondweni yalo bese kuvumela inkululeko yokuhamba ngokuphepha, ”Kusho uGuevara.
Indatshana eshicilelwe ngu eTurboNews izolo ukusola i-WTTC ngokufuna ukubuza ukuthi "Ukuphepha noma ibhizinisi kufanele kube yinto eza kuqala, kwashukumisela impendulo yomkhulumeli we-WTTC uJeff Pole lapho athi:
“Asikwazi ukuvumelana nowakho eTurboNews ukuthi i-WTTC ibeka imboni phambili kwezokuphepha komphakathi njengoba lokhu kumelela kabi isikhundla nezitatimende ze-WTTC. Besisho ngokungaguquguquki ukuthi ukuphepha komphakathi kufanele kube yinto ehamba phambili. Kepha asikholwa ukuthi kunesidingo sokuthi kube khona ukungqubuzana phakathi kokuphepha komphakathi nokuvula kabusha ngokuphepha imingcele yamazwe omhlaba nokuqalisa kabusha uhambo lwamazwe omhlaba.
“Ukuvinjelwa kohambo kanye / noma ukuhlukaniswa kwabantu abagulayo abagulayo kufanele kungadingeki uma kwenziwa ukuhlolwa kokulungiselela ngaphambi kokuhamba, ukugqoka izifihla-buso ebusweni kuyimpoqo, futhi kulandelwa imigomo yokuphepha eqinile nenhlanzeko. Ukuqaliswa ngokushesha kwemigomo, ikakhulukazi kwababuthakathaka kakhulu, kuzosiza futhi ekunciphiseni kancane kancane umthelela omubi we-COVID-19. ”
UJuergen Steinmetz, umsunguli we-WTN, uthe: “Ukuhlolwa okuphoqelekile ngaphambi kokufika nokuhlukaniswa kwabantu kuye kwaba yinto evamile ezindaweni eziningi zokuvakasha nezokuvakasha, kubandakanya ikhaya lami lapha eHawaii. Kusukela lapho uMbuso wami uvumela izivakashi ukuba zibuye ngo-Okthoba 15, kube nokwanda kwamacala nokufa kwabantu.
“Uma sibheka izindlela eziqinile zokufika kweSeychelles ezenziwa ne-Israel, leso sinyathelo asisebenzanga nhlobo. Umphumela ubeka iRiphabhlikhi yaseSeychelles esimeni esibi sezempilo maqondana ne-COVID-19.
ISeychelles manje isivumela izivakashi ukuthi zingene noma yikuphi emhlabeni ngomuthi wokugoma we-COVID. "Lokhu kungaba yindlela eyamukelekayo phambili", kusho uSteinmetz.
“I-UK ayiyedwa. Abaholi abaningi be-EU bayayibona ingozi futhi bayanda imikhawulo. Izinyathelo ezinzima kangaka akumele zichithwe yisidingo sesikhashana esifushane somkhakha weTravel & Tourism futhi zibeke abantu engcupheni. Noma izingqinamba zizodambiswa, iTravel & Tourism ibingeke ibuye ngomlingo ngokushesha. Ukuzethemba komthengi kuyisihluthulelo.
“Ngohlobo olusha lwegciwane olusakazeka e-UK, South Africa, eBrazil, futhi manje nakwamanye amazwe, kufaka phakathi i-United States enamacala ama-2 asanda kutholakala namhlanje nalapha eHawaii, lokhu kwenza umbono we-WTTC ube yisilingo esinobungozi obukhulu lowo akufanele ajabule ngalesi sikhathi.
“Noma ukwenqaba isincomo se-WTTC kungaba yinto ebucayi yesikhashana embonini yethu, sonke sizonqoba uma yonke indawo esiya kuyo izolokhu ingene lapho kuze kugonywe iningi labantu. Umuthi wokugoma kuphela ozobuyisa ukuzethemba kubantu futhi ukwenze kuphephe ukuhamba. Asikho isitifiketi, isitembu, izinga lempilo, futhi akukho ukukhangisa okubizayo okuzothatha isikhundla salokhu. ”
Ukuthola eminye imininingwane ngeWorld Tourism Network, iqembu lezingxoxo lamalungu wochwepheshe beTravel & Tourism emazweni ayi-125 liya
UDmytro Makarov udabuka e-Ukraine, uhlala e-United States cishe iminyaka eyishumi njengommeli wangaphambili.
Izeluleko Zohambo lwase-US zingumhlaba jikelele ...
ICyprus Yenza Ukuhlolwa Kwamasonto onke kwe-COVID-19 Kuphoqelekile Kubo Bonke ...
Isifunda Sokuzijabulisa eToronto samukele okusha ...